कान्ति अस्पतालमा आज भेटिए थप पाँच सङ्क्रमित : RajdhaniDaily.com
Home Editor-Picks कान्ति अस्पतालमा आज भेटिए थप पाँच सङ्क्रमित
काठमाडौँ । आज कान्ति बाल अस्पतालमा एकै दिन पाँचजना बालबालिकामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । आज पत्ता लागेकासँगै नयाँ भेरियन्टसहित कोभिड–१९ का बिरामीको सङ्ख्या १० पुगेको अस्पतालले जनाएको छ । गत वर्षभन्दा यो वर्ष सङ्क्रमण फैलिने दर उच्च भएकाले सङ्क्रमित थपिरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
एक सातायता दिनमा एकदुईजना देखिएकामा आज एकै दिन बढी सङ्ख्या देखिएको अस्पतालका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्क्रमण सबैतिर बढिरहेमा यहाँ पनि बढ्न सक्छ ।” कोभिडकै उपचारका लागि तोकिएको अस्पताल नभएकाले अरू स्वास्थ्य समस्या लिएर आएका बिरामीको परीक्षण गर्दा कोभिड पाइएको अस्पतालले जनाएको छ । रुघा, खोकी, ज्वरो, निमोनिया भएर आएका ती बालबालिकामा परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता डा विष्टले बताउनुभयो । अस्पतालले कुनै पनि बालबालिका अस्पताल छिर्नासाथ ज्वरो हेर्न ‘फिबर क्लिनिक’ को व्यवस्था गरेको छ । कोभिडसँग मिल्दो लक्षण भएका शङ्कास्पद बिरामीलाई छुट्टै वार्डमा राखिने गरिएको प्रवक्ता डा विष्टले बताउनुभयो ।
बालबालिकाको रिपोर्ट पोजेटिभ भएमा कोभिडका लागि छुट्याइएको श्ययामा उपचार गरिन्छ । सङ्क्रमित नभएको पाइएमा अरू सामान्य श्ययामा उपचार गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि अस्पतालमा कोभिडभन्दा अरू बिरामी धेरै छन् ।” अस्पतालले नियमित सेवालाई निरन्तरता दिइरहेको भए पनि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा घोषणा गरेपछि बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको अस्पतालले जनाएको छ । सामान्य अवस्थामा बहिरङ्ग सेवा, आकस्मिक सेवा गरेर दैनिक सातदेखि आठ सयसम्म बिरामी आउने गरेका थिए । अहिले दैनिक झण्डै एक सयदेखि डेढ सयसम्म छ । उहाँले भन्नुभयो, “यातायातको साधन नभएकाले पनि आउन नसकेको हुनसक्छ ।” अस्पतालले दुई भेन्टिलेटर र चार आइसियुसहित २६ श्यया कोभिड सङ्क्रमित बालबालिकाका लागि छुट्याइएको छ ।
राससका अनुसार यी सबै श्ययामा अक्सिजनको व्यवस्था छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेर आवश्यक भएमा थप श्ययाको व्यवस्था गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । अस्पतालले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई पहिले कोभिड परीक्षण गर्दै आएको छ । परीक्षण गर्दा नेगेटिभ भएमा तुरुन्त शल्यक्रिया गरिने र पोजेटिभ भएका बिरामी, जसलाई केही दिन ढिलाइ गर्दा स्वास्थ्यमा असर गर्दैन भने तत्काल नगरिने उहाँले बताउनुभयो । तत्काल नै शल्यक्रिया आवश्यक भएका सङ्क्रमितलाई चिकित्सकले पिपिई लगाएर शल्यक्रिया गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अघिल्लो वर्ष पनि त्यसरी नै सङ्क्रमित बालबालिकालाई शल्यक्रिया गरेका थियौँ ।”
गत वषजस्तै बालबालिकामा सङ्क्रमण हुँदा रुघाखोकी, पखाला, जीउ दुख्नेलगायत लक्षण बढी मात्रामा देखिरहेको छ । बालबालिकामा समस्या आएमा अस्पताल लगे पनि सामान्य अवस्थामा घरमा नै राखेर हेरचाह गर्न सकिने प्रवक्ता डा विष्टको सुझाव छ । अहिले विद्यालय बन्द भएकाले धेरै बालबालिका घरमै छन् । उनीहरुलाई अरूभन्दा आफ्नै अभिभावकबाट सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना बढी छ । बालबालिकालाई कोभिडबाट बचाउन अभिभावक आफैँ सुरक्षित हुनुपर्ने डा विष्टको सुझाव छ । आफू विवाह, व्रतबन्धलगायत भीडभाडमा नजाने र कतै अत्यावश्यक कामका लागि हिँड्नुपर्दा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनुपर्छ । बालबालिकालाई यो समयमा पनि नियमित लगाउने खोप लगाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
अभिभावकले पनि कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध भएसम्म लगाउन आवश्यक छ । बालबालिकालाई सामान्य ज्वरो र खोकी हुँदा घरमा नै औषधि खुवाएर राख्न सकिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “तर उनीहरुलाई सास फेर्न गाह्रो भएमा, ज्वरो उच्च भएमा, बेहोस हुने र सास फेर्न समस्या हुँदा अस्पताल लैजानुपर्छ ।”
नयाँ दिल्लीमा कोठी सञ्चालन गर्ने रुकमाया पक्राउ
काठमाडौं । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित जिबी रोडमा बेश्यालय (कोठी) संचालन गरी बस्ने नुवाकोट दुप्चेश्वर नगरपालिका–२ घर भएकी (चमेली) सिता तामाङ भन्ने ६२ वर्षीया रुकमाया...
चीनलाई उपहार दिएको गैंडामध्ये एकको मृत्यु
ललितपुर । चीन सरकारलाई उपहारस्वरूप दिइएको दुई जोडीमध्ये एक गैंडाको मृत्यु भएको छ । गत वर्ष भदौमा सांघाई वाइल्ड एनिमल पार्कमा पठाइएको ‘सोल्टी’ र...
कला राजधानी समाचारदाता - September 2, 2020 0
काठमाडौं । निर्माता रामकृष्ण पोखरेलले निर्माण गर्न लागेको फिल्म ‘रिभर इन दि मिरर’ बुसानको एसियन प्रोजेक्ट मार्केट (एपीएम)मा छनोट भएको छ । भुटानी निर्देशक...
Exclusive राजधानी समाचारदाता - November 21, 2020 0
Breaking News राजधानी समाचारदाता - March 5, 2020 0
काठमाडौँ । मिर्गौला प्रत्यारोपणको दोस्रो दिन आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तरल चीजहरु खान थाल्नुभएको र...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - March 7, 2020 0
चौतारा । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नं २ लिदीमा शुक्रबार गएको पहिरामा पुरिएर मृत्यु हुने २४ जना पुगेका छन् । आज ७२ वर्षीया श्रीमाई...
मकुना हात्तीले फेरि मान्छे मार्यो
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - December 29, 2020 0
इटहरी । कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट निस्केको ‘मकुना’ हात्तीले फेरि अर्का एक स्थानीयको ज्यान लिएको छ । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–५ श्रीपुर बस्ने २७ वर्षीय मोतीलाल...
कोरोना संक्रमितलाई दु्र्व्यवहार गर्ने ५६ जनालाई कारवाही
लमजुङ । लमजुङमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बारे अफवाह फैलाउने ५६ जना कारवाहीमा परेका छन् । उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारवाही गरेको हो । कोरोना...